Altinordu Intercity Bus Terminal Oru Owu oru Ebido | RayHaber
HomeTurkeyBlack Sea Region52 ArmyAltınordu Inter Terity Bus Terminal Oru Oru bidoro
15 / 09 / 2019 52 Army, Foto, General, Black Sea Region, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Turkey
Ọrụ ụlọ ọdụ ụgbọ ala nke Altinordu bidoro
Mpaghara Ordu mepere emepe Altinordu, nke emere na nsọtụ okporo ụzọ ahụ wee kwụsị ọrụ ụlọ oge gara aga 'Altinordu Intercity Bus Terminal' na-arụ ọrụ amalitela.
Mkpo 3 puku 177 square mita wuru na mpaghara ọrụ ahụ malitere na nkwụsị njedebe. Site na mmeghe nke mgbanaka ahụ, Altınordu Terminal, nke abụrụla ihe dị mkpa maka mbughari njem njem na okporo ụzọ obodo, na-arụcha ma tinye ya n'ọrụ.
Onye isi obodo nke Ordu Obodo Mehmet Hilmi Guler, Altinordu Intercity Bus na Terminal na-ewu atụmatụ iji mezue ọrụ ahụ n’oge na-adịghị anya, ka o kwuru. Mayor Güler kwuru, alar ọrụ ahụ bidoro ọzọ site n'aka ụlọ ọrụ nkwekọrịta. Ekwere m na mgbe arụchara ya ga-enyere mba anyị aka na usoro ọgbara ọhụrụ.
EGO SOLAR ENERGY SYSTEM MAKA EGO
Altınordu Intercity Bus Terminal, nke a ga-eji teknụzụ ọgbara ọhụrụ na nke ọgbara ọhụrụ wuo, bụ ụlọ nwere onwe ya zuru oke site na imepụta 322 puku KW eletrik kwa afọ yana ọkwa ọkọlọtọ dị elu edobere n’elu ụlọ. N'ime ọdụ ọdụ mpaghara mpaghara ime obodo 8 (minibus district), ebe a na-adọba ụgbọala 28 (ebe etiti), ebe a na-adọba ụgbọala 67, ebe a na-adọba ụgbọala etiti etiti 16, ebe a na-adọba ụgbọala n'ime ime ụlọ nke 90, ebe a na-adọba ụgbọala, ebe a na-adọba ụgbọala 54, ebe ihe nkiri 28, ebe ihe nkiri 20 ụlọ kwụsiri ike. Site na mmejuputa atumatu a, a ga-ebelata oke ubochi nke ndi n’a n’etiti obodo ma mebe ihe owuwu nke ugbua na uzo ugbo ala.
Altınordu Bus Terminal…
Altınordu Intercity Bus Terminal 80 pasent Yüzde
Ewube Mgbidi Altınordu na-ebili na 25 Ọkwa
Ngwurugwu Bus Bus Altınordu na-aga n'ihu na-enweghị ọsọ ọsọ
Mentese-ejedebe na Mmetụta Ọrụ Ngwá Ọrụ
Ụgbọ njem na-amalite na Altınordu
Azu Ikpeazụ maka System Alt Transport System
Usoro njem ụgbọ elu nke Altınordu na-amalite ọhụụ ọhụrụ echi
Ogwe Ọdụ Bus Altınordu emeghewo Ụlọ Ọrụ Njem Njem ya
Iwu Ọhụụ maka Ọha Ọha na Altınordu
Mpaghara 9 dị na Altınordu nwere ibe T
Obodo Altınordu Nwere Egwurugwu Egwu
Ejila Ngwá Ọrụ Na-eme Ka Mwepụ Ịrụ Ọrụ Na-aga n'Ihu Bayern
Ogwe Ngwá Ọrụ Na-akpata Ịgba Ọkụ Na-akwụsị Ọgwụgwụ!
Ileghara ọnụ ọnụ ọnụ